I-Shalom Family Villa - I-Airbnb
I-Shalom Family Villa
Aguadilla Pueblo, Aguadilla, i-Puerto Rico
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Yesy
U-Yesy Ungumbungazi ovelele
Uzoyithanda indawo yethu ngenxa yendawo, usondele eduze kwamabhishi nedamu lokubhukuda elizimele lapho ufuna ukuhlala ekhaya futhi uphumule. Indawo yami ilungele izithandani, abantu abazihambela bodwa, abahambi bebhizinisi, imindeni (enezingane), nabangane abanoboya (izilwane ezifuywayo).
Amanye amabhishi adume kakhulu ePuerto Rican phakathi nemizuzu. Abantu abaningi bendawo kanye nabatshuzi endaweni bazophikisana ngokuthi amanye amabhishi okusefa angcono kakhulu ase-Aguadilla.
Leli khaya linamakamelo okulala amathathu, amabili anombhede wendlovukazi, elinye elinamawele. Futhi 2 okugeza osayizi ogcwele kanye nedamu langasese. Uhambo lwakho olufushane lwemizuzu emi-5 ukusuka ogwini.
Uzoyithanda indawo yethu ngenxa yendawo, indawo ezungezile, nendawo yokubhukuda eyimfihlo. Indawo yami ilungele izithandani, abantu abazihambela bodwa, abahambi bebhizinisi, imindeni (enezingane), nabangane abanoboya (izilwane ezifuywayo).
UYesy Ungumbungazi ovelele